AC Milan oo Mar Kale Khasaartay
Kooxda sanadkaan kharashka badan la geliyay ee AC Milan ayaa jab kala soo laabatay magaala xeebeedka Genoa kadib marki ay 2-0 ku lumisay kooxda Sampdoria oo ay marti u aheyd, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Talyaaniga.
Labada gool ee ay Sampdordia ku badisay oo yimid gelinki danbe ee ciyaarta, ayaa waxaa kan hore saxiixay Duvan Zapata.
Duvan Zabata ayaa goolka uu dhaliyay wuxuu ahaa mid uu madaxa ugu baasay ina adeerkiis Cristian Zapata oo difaaca uga ciyaara Milan kaasoo inta uu kubada iska bixi lahaa u baasay Duvan oo weerarka uga ciyaara Sampdoria, goolka labaadna waxaa dhamaadki ciyaarta dhaliyay Ricky Alvarez oo beddel kusoo galay.
Waa guul darradii labaad oo Milan soo gaarta tan iyo marki uu bilowday xilli ciyareedka cusub ee horyaalka Seria A. Dhawaan ayaa waxaa 4-1 ku garaacday Lazio.
Ciyaaraha kalana, Inter Milan waxay 1-0 uga badisay kooxda Genoa. Goolka guusha waxa u saxiixay Danilo D'Ambrosio.
Fiorentina 1 - 1 Atalanta.
Sabtidiina Napoli waxay 3-2 uga badisay kooxda SPAL. Juventus waxay 4-0 isaga reebtay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Torino, halka Roma ay 3-1 ku dubatay Udinese.
Horyaalka Talyaaniga waxaa isla hogaaminaya Juventus iyo Napoli oo leh min 18 dhibcood, waxaa kusoo xiga Inter oo leh 16 buundo. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Lazio oo leh 13 dhibcood, waxaa afraad wada degan Milan iyo Roma oo leh min 12 dhibcood.